Madaxweynaha Mareykanka oo ku goodiyay inuu cunaqabatayn adag saari doono Madaxweynaha Venezuela – Walaal24 Newss
March 20, 2019	0	By walaal24
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Talaadadii in Maraykanku uu saari doono cunaqabateyn adag oo ku wajahan Venezuela ololaha doorashada madaxweynaha Nicolas Maduro.
Wadanka Venezuela ayaa muujinaya in “wax aad u xun ay ku socdaan halkaa” iyo “waxaan u baahannahay inaan soo afjarno xaaladdan xaadirka ah,” ayuu Trump ku sheegay shir jaraa’id oo wadajir ah lala yeeshay madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro oo ka socda Aqalka Cad.
Labada madaxweyne waa Brazil iyo Maraykanku waxay taageeraan hoggaamiyaha mucaaradka Venezuela Juan Guaido, oo loo aqoonsaday inuu yahay hoggaamiyaha sharciyadeed ee waddanka ku dhawaad ​​50 dal.
Dowlada Mareykanka ayaa ku eedeysay dowladda Venezuela inay cunaqabateyn ku soo rogtay mucaaradka taas oo bedlkeeda noqoneyso in la saaro cunaqabateyn shakhsiyaadka la xirriiraya dowladda Maduro, kuwaas oo ku eedeeyay inuu yahay bartilmaameed ka mid ah qorshaha Maraykanka.
Venezuela ayaa si weyn u sii xoojiyay xiisadda sii kordheysa ee ka dhaxaysa madaxweyne Nicolas Maduro mustaqbalka hoggaamiyaha Juan Guaido.
Maduro ayaa bilowday xilli labaad oo ah 10-kii Janaayo, ka dib doorashadii ballaadhnayd ee sannadkii hore ay dawladaha shisheeye oo badani diideen inay aqoonsadaan.
Janaayo 23-keedii, Juan Guaido, oo ah hogaamiyaha Golaha Qaranka ee mucaaradka ah ayaa lagu dhawaaqay madaxweynaha kumeel-gaarka ah.
Taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka Venezuela Juan Guaido, oo dalal badani u aqoonsan yahay in uu yahay taliyaha ku-meel-gaadhka ah ee dalka, ayaa ka qaybqaatay dibad-bax lagu dalbanayo madaxweyne Nicolas Maduro si loogu ogolaado gargaarka bini’aadanimo in uu galo dalka.
Wadanka Venezuela waxaa lagu soo rogi karaa ciqaab aad u adag “Venezuela haddii loo baahdo, Trump ayaa yiri, isaga oo sidoo kale ku celiyay in” doorashooyinka oo dhan ay furanyihiin “marka ay wax ka qabanayaan dhibaatada Venezuela. Wuxuu intaa ku daray in Maraykanku “uusan raadin wax kale oo aan ahayn dad badan oo daryeeli jiray.”
Saraakiil Mareykan ah ayaa sheegaya in ay diiradda saarayaan cadaadiska diblomaasiyadeed iyo maaliyadeed ee xukuumadda Maduro, kaas oo sheegay in Trump uu isku diyaarinayo talaabooyinka milatari ee waddanka la halgamaya sicir bararka iyo yaraanta alaabta aasaasiga ah. Sanadihii ugu dambeeyay, in ka badan 3 milyan oo reer Venezuela ah ayaa ka soo cararey dal taas oo hal mar ka mid ah dalalka ugu qiimaha badan ee Latin America sababtoo ah kaydka weyn ee saliida.
Mareykanka iyo Guaido ayaa ku dhaleeceeyay qaraxyadii ugu dambeeyay ee ka qarxay waddanka oo lagu eedeeyey in ay ku lug lahaayeen falal liddi ku ah maskaxda Maduro, kaas oo ku eedeeyay waxa uu sheegay in uu ahaa weeraro loo geysto Mareykanka.
Maalintii Talaadadii, Mareykanka ayaa ku daray shirkad macdanta ah ee gobolka Venezuela in ay sii kordhiso liiska cunaqabateynta sii kordheysa maaddaama ay doonayso inay cadaadis ku kordhiso Maduro. Hawlgalku wuxuu ka dhigan yahay muwaadin Mareykan ama hay’ad ka socota dhaqdhaqaaq dhaqaale oo la leh shirkadda dahabshiil ee dahabiga ah ee minerven iyo madaxweynaha, Adrian Antonio Perdomo Mata. Shirkadda ayaa gacan ka gaysatay kor u qaadista Maduro, sida ay sheegtay Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka.
Wasaarada Maaliyadda ayaa sidoo kale xayiraad ka qaadatay xaasaska labo ka mid ah TV-ga Venezuela oo ku dhow Maduro laba bilood ka dib markii hantidooda Maraykanku ay barafoobeen iyagoo qeyb ka ah musuqmaasuqa.
Maria Alexandra Perdomo iyo ninkeeda, Raul Gorrin, ayaa ka mid ahaa toddoba qof oo lagu soo oogay bishii Janaayo iyaga oo lagu eedeeyay in ay ku shaqeynayeen shabakad farsamo oo $ 2,4 bilyan oo ka mida khasnadaha dawlada iyada oo loo marayo heshiisyo musuqmaasuq ah.
Raul Perdomo, ayaa sheegtay in labadan haween ay wada shaqeyn la yeelan doonaan xukuumadaha Mareykanka oo isku dayaya in ay xakameeyaan websaydka musuqmaasuqa ee sii kordhaya muddada labaatanka sano ee xukunka bulshada. ee Venezuela. Dacwad oogayaasha Miami ee Gorrin sannadkii hore ayaa lagu eedeeyay laaluush siiyay mas’uuliyiinta Venezuela.
Magaalada Rome, saraakiisha Mareykanka iyo Ruushka ayaa wali ku kala qaybsan sidii loo xalin lahaa dhibaatada Venezuela ka dib wadahadal halkaas. Elliott Abrams, Ergeyga Gaarka ah ee maamulka Wadanka Venezuela, ayaa la kulmay Wasiir Ku-xigeenka Arrimaha Dibedda Ruushka Sergei Ryabkov.
“Ma aanan imaanin kulan maskaxeed, laakiin wadahadaladu waxay ahaayeen kuwo sax ah oo dareen ah oo aan u malaynayo in labada dhinac ay soo baxeen faham wanaagsan oo aragtida kale,” Abrams ayaa sidaas u sheegay wariyaasha.
Ruushka ayaa taageersan Maduro waxaana uu ku eedeeyay Washington in uu ku lug leeyahay arrimaha Venezuela isaga oo ku adkeynaya in uu iska casilo oo uu awood u siiyo Guaido, hogaamiyaha mucaaradka ka taliya mucaaradka oo doonaya in uu qabto doorashooyin.
Isagoo ka hadlaya warbaahinta Ruushka, Ryabkov wuxuu xoojiyay baahida loo qabo wadahadal lala yeesho Maraykanka laakiin wuxuu uga digay Washington in ay ka hor tagaan wax kasta oo ka hortag millatari.
“Waxaan ka digay Maraykanka inay ka horimaanayaan habdhaqankaas,” ayuu Ryabkov ku yiri hadal uu soo saaray wakaaladda wararka ee Tass iyo RIA Novosti.
Shaqaalaha Wasaaradda Boostada, Isgaarsiinta & Teknolojiyada XFS iyo Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka oo tababar loo soo xiray
Maalintii labaad oo Muqdisho uu ka socdo Kulanka wadatashiga Astaynta Awoodaha Heerarka Dowlada
Wasiirada Caafimaadka XFS oo daah furtay ololaha ciribtirka cudurka Daacuun Caloolaha
Gudomiye ku xigenka labaad ee Golaha Shacabka ayaa kasoo horjeystay go’ankii gudomiye ku xigenka koowaad ee Barlamaanka uu ku shegay Xiliga Xildhibanada ay u fadhisanayan Moshinka ka dhanka Gudomiye Jawaari